Daraasadda InMoment waxay daaha ka rogaysaa 6 fure oo lama filaan ah oo shaqsiyan ah | Martech Zone
Suuqyayaashu waxay ku darsadaan waaya-aragnimo shaqsiyeed xayeysiis si fiican loo bartilmaameedsaday halka macaamiisha ay la xiriirinayaan khibradooda macaamiisha (CX) ee taageerada iyo iibsashada. Xaqiiqdii, 45% macaamiisha ayaa mudnaanta siiya helitaanka khibrad shaqsiyadeed oo loogu talagalay isdhexgalka taageerada kuwa la macaamilaya suuqgeynta ama nidaamka shaqsiyeed ee iibsiga.
Farqiga ayaa loo aqoonsaday oo si buuxda loogu diiwaangaliyay daraasad caalami ah oo cusub oo ka socota InMoment, Awoodda Dareenka iyo Shakhsi ahaaneed: Sidee Calaamaduhu u fahmi karaan una la kulmi karaan rajooyinka macaamiisha. Waddan kasta oo la daraaseeyay, astaamaha iyo macaamiisha iswaafajin maayaan markii wax laga waydiiyo shakhsi ahaanta. Natiijooyinka waxay tilmaameen dhibaatada iyo fursadda la xiriirta shaqsiyeynta.
In kasta oo ay jiraan kala duwanaansho waddan ilaa waddan, macaamiisha adduunka ayaa aad uga siman sidii ay u kala duwanaayeen. Waxay rabaan magacyada inay ilaaliyaan balanqaadyadooda isla markaana ay sameeyaan dadaal ay ku shakhsiyeeyaan taageerada ay ku bixiyaan guud ahaan safarka macaamiisha. James Bolle, VP, Madaxa Adeegyada Macaamiisha, EMEA ee InMoment
Tani waxay tilmaamaysaa arrin aynaan ka qaylinaynin ku filan - suuqgeynta waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha laga filayo kulanka iyo waaxda adeegga macaamiisha ee bixisa taageerada gaarka ah. Haddii midkoodna la la'yahay, adduunkan bulsheed waxay saameyn xun ku yeelan doontaa dadaalkaaga guud ee suuq-geynta.
Natiijooyinka loogu talagalay hagaajinta khibrada macaamiisha adeegsiga shaqsiyeynta waxay farta ku fureysaa furayaasha muuqda ee guusha, laakiin inbadan oo ka mid ah ayaa lama filaan ku noqon doonta ururo badan. Macaamiisha ayaa raba:
Khibrad Shaqsiyeed - Haddii aad ururineyso macluumaad, macaamiisha waxay kaa filayaan inaad u adeegsato xogtaas si aad shakhsi uga dhigto farriinta iyo dallacsiinta si waafaqsan.
Transparency - Calaamaduhu waa inay ogeysiiyaan macaamiisha siyaabaha jawaab celintooda loogu adeegsanayo hagaajinta ama beddelka badeecada ama adeegga.
Dareenka Trumps Function - Kala duwanaanta noocyadu waxay ka dhalan doontaa cilaaqaadka iyo khibrada macaamiisha marka loo eego sifooyinka ama xulashada alaabada.
Daraasado Gaaban, Dhegeysi Dheeraad ah - Daraasado jawaab celin oo gaaban oo leh faallooyin u oggolaanaya macaamiisha inay sheekooyinka ku wadaagaan ereyadooda. Isticmaalka kororka ee la socodka iyo isu geynta bulshada, codka, iyo xogta kanaalka moobiilka.
Marka hore Mobil - Hubinta taageerada 24/7 ee mobilada si wax looga qabto caadooyinka mobilada ee macaamiisha sii kordhaya.
Faallooyin badan oo khadka tooska ah lagu kalsoonaan karo - Calaamadaha ka caawinaya macaamiisha inay arkaan macluumaadka asxaabtooda ee ku saabsan iibsashada go'aamada iyagoo taageeraya dib u eegista internetka ee la xaqiijiyay.
Daraasadda waxaa ka mid ahaa jawaabaha macaamiisha 20,000 iyo 10,000 magac oo ka kala socda 12 dal, oo ay ku jiraan Australia, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, New Zealand, Norway, Spain, Sweden, United Kingdom iyo Mareykanka. Warbixintu waxay raadineysaa lix su'aalood oo jaangooyooyin ah iyo intaa dheer, waxayna baareysaa doorka shaqsiyeynta iyo shucuurta xiriirka calaamadeynta iyo macaamilka.
Soo Degso Warbixinta InMoment oo Buuxda
Ku saabsan InMoment
InMoment ™ waa barxad kumbuyuutar ku saleysan khibrad macaamiil (CX) oo ka caawisa sumadaha inay ka faa'iideystaan ​​fikradaha macaamilka iyo shaqaalaha si ay ugu wargeliyaan go'aannada ganacsi ee wanaagsan, ayna u abuuraan xiriiro qiimo sare leh.
Tags: noocyadarajooyinka macaamiishakhibrada macmiilkacxqabashada xogtadareenkaduqeynshakhsi ahaaneedtalooyinka alaabtaxeeladaha sahanka